२८. नार्इ भन्ने ताकत २ - Harish Bk
Home/ Article/२८. नार्इ भन्ने ताकत २
Harish BK November 26, 2017
यस्तै कुरा, सानो छँदा पेलेले पनि आप्mना शिक्षकहरूलाई भनेका थिए । उनी सानैदेखि फुटबलमा रमाउने मात्र हैन मरि–मेट्ने व्यक्ति हुन् । यहाँ मरिमेट्ने शब्द माथी ध्यान दिनु पर्दछ , किनभने यिनै गुणबाट महापुरुषको अवतरण हुने हो । अतः उनमा यो गुण जन्मजातै देखियो । घरदेखि स्कुलसम्म आउँदा पनि उनी झुम्रोको बल बनाई खेल्दै स्कुल पुग्थे । यसरी पढाइभन्दा बलमाथीको लगाव–प्यार देखेर शिक्षकहरूले उनलाई हकार्नु हकारेका थिए तर उनमा पनि सबै महापुरुषमा हुने ताकत थियो– नार्इँ भन्ने । उनले ठाडै भने– सर म पढ्नको लागी हैन, खेल्नको लागी जन्मेको, फुटबल खेल्नको लागी । इ, फुटबल मेरो रगतको नशा–नशामा बगिरहेको छ ।
यहाँनिर एकजना केटाको प्रसंग अत्यन्त मननिय छ । एक जना ब्राजिलकै केटालाई उनका आमा–बाबा वकिल बनाउन चाहन्थे । तर त्यो केटा भने साहित्य पढ्न चाहन्थे । आमा–बाबाले उनलाई जबर्जस्ती कानुन पढाउन वाध्य पारी छाडे । उनले नाईँ–नास्ती गर्न सकेनन् । र त मन परेको विषय छोड्नुको पीडा र मन नपरेको विषय पढ्नुको दोहोरो मार उनले झेल्नु प¥यो । परिणाम ? परिणाम स्वरूप उनी डिप्रेसनको शिकार भई थला परे । बल्ल उनका अभिभावकहरूले आफ्नो गल्ती ठम्याउन पाए । पछि छोरोलाई जे मन लाग्छ त्यही पढ भनी छोडी दिए । त्यसपछि उनले साहित्य सृजना गर्न थाले । नभन्दै उनी विश्व–बिख्यात साहित्यकार बने । आज उनको किताब संख्याको हिसाबले सबभन्दा बढी बिक्नेमा पर्छ । उनको नाम हो पाउलो कोइलो । यस्ता््े अद्धितीय प्रतिभा शुरूमा दबिनुको कारण थियो– आमा बाबाको प्रस्तावलाई नाईँ भन्न नसक्नु ।